Homeसमाचारमलमासको समयमा गर्दै नगर्नुहोस् यी ५ कामहरु
October 4, 2020 admin समाचार 13540
परम्प’रानुसार मलमासको अव’धिमा शुभ कार्य गर्न नहुने धर्मशास्त्रका विज्ञले बताएका छन् । बि’हीबार अपरान्ह ४ः५९ बजेदेखि शुरु भएको मलमास असोज ३० गते राति १ः५३ बजेसम्म रहनेछ । सो अवधिमा कुनै पनि नयाँ कार्य’को थालनी गर्न नहुने उनीह’रुको भनाइ छ ।
वाल्मी’कि विद्यापी’ठ धर्मशास्त्र विभा’गका प्रमुख देवमणि भट्टराई मलमास र क्षयमा’स जस्ता समयलाई शास्त्रले शुभ कार्य गर्न वर्जित गरेको बताउँछन् । मलमा’समा विवाह, व्रतब’न्ध, पक्षअनुष्ठान, पुराणवाचन जस्ता कार्य गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने,“नित्य कर्मह’रु, नैतित्यक कर्म’हरु मलमा’सभित्र गर्न सकिन्छ ।”
यसमा घरमा गरिने नियमित पू’जापाठ, मन्दिर दर्शन, तिथि, बार या नक्षत्र मिलेर गर्ने योग’हरु गर्न मिल्ने उनले बताए । मलमासको कृष्ण पक्षमा जन्मिएका वा मृत्यु भएकाको तिथि निर्धारण गर्दा एक महिना पछिको गरिन्छ । मलमा’सको सम’यमा विवाह गरेको पहिलो वर्ष परेमा श्रीमा’न् श्रीमती सँगै बस्न नहुने प्रचल’न रहेको छ ।
भट्ट’राईले भने,“दोस्रो, तेस्रो वर्ष प’रेमा बार्नु पर्दैन ।”
धार्मिक, सांस्कृ’तिक अध्येता डा. गुरु’प्रसाद सुवेदी मलमा’समा गृहस्थ जीवन शुरु गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार विशेष संस्कारका कर्महरु, नान्दी’मुखी श्राद्ध गरेर सम्पन्न गरिने स’प्ताह जस्ता ठूला यज्ञ र मन्दिरको प्रति’ष्ठा कर्म गर्न हुँदैन ।
मल’मास चन्द्रमाको गति अनुसारको महि’नाभित्र सूर्यको संक्रान्ति परेन भने यो एउटा अधिक’मास हो । यसलाई मलमास भनिन्छ । अधिकमास प्रत्येक तीन वर्षमा एकपटक आउँछ । प्रत्येक राशि, नक्षत्र, महिना आदिका स्वामी छन् तर अधिक मास अर्थात् मल’मासको स्वामी छैनन् ।
यस’कारण अधि’कमासमा सम्पूर्ण शुभ, देव एवं पितृ कार्य वर्जित मानिएको उनको भनाइ छ । अधिकमास परेकाे महिनामा के गर्नु हुन्छ ? के गर्नु हुँदैन ? अधिकमास परेकाे महि’नामा मुहुर्त जुराएर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्म’हरु वर्जित गरिएकाे छ ।
शास्त्रीय नियम’अनुसार अतिरिक्त समय भएका’ले याे समय अन्य समयभन्दा कमजाेर हुनेहुँदा नयाँ थालनी गरिएका कार्यहरु सफलहुने सम्भा’वना एकदमै न्यून हुन्छ । यस्ताे सम’यमा श्राद्ध तथा पितृकार्य, विवाह, व्रतवन्ध, चूडाकर्म,सप्ताह, नवाह, महारुद्रि,शतचण्डी लगाएका कुनै पनि धार्मि’ककर्महरु त्यस्तै गृहप्रवेश, नयाँ कार्यको थाल’नी, नयाँ यात्राको शुभा’रम्भ गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
नव विवा’हित दाम्पत्ती’हरूका लागि अधिकमास बार्नुपर्ने नियम रहिआएको छ । वैवाहिक सम्बन्धमा बाधिएपछि एक पटक सबै विवाहित महिला’हरुले अनिवार्य पहिलो अधिक’मास बार्नुपर्ने नियम रहिआएको छ । यदि नबारेमा पतिलाई शारीरिक,मानसिक तथा आर्थिक कष्ट पर्ने मुहूर्त मार्तण्ड र मूहूर्तचिन्ता’मणि नामक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ।
एकपटक बारेपछि अरु वर्षहरुमा मल’मासपर्दा बारिरहनु नपर्ने पनि बता’इएकाे छ । दैनिक रूपमा गर्दै आएका कर्महरू जस्तो नित्य पाठपूजा, नामाकरण लगा’यतका कर्महरु गर्नहुने भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अधिक’मासका अधिप’ति स्वामी भगवान् विष्णुलाई मानिएको छ । त्यसकारण यसलाई पुरुषाे’त्तममास भनर पनि भनिएकाे छ । पाैराणिक कथा’अनुसार सूर्य र चन्द्रमा बिचकाे सन्तुलन मिलाउनका लागि अधिकमा’सकाे गणना भएकाे हाे ।
हरेक महि’नाकाे मासदे’वताका रुपमा नामा’करण गर्ने क्रममा अतिरिक्त रहेकाे महिना या मलमा’सकाे नामाक’रणमा कुनै पनि देवता अधिपति हुन राजि नभएपछि ऋषि महर्षी’हरुकाे आग्रहमा भगवान् विष्णुलाई गरिएको आग्रह पछि यस अतिरिक्त मलमासकाे मासदेवताका रुपमा भगवान् विष्णु’लाई जिम्मा दिइए’काले पनि यसलाई यसलाई पुरुषाे’त्तममास भनेर भनि’एकाे हाे । विशेषगरी यस अबधिभर भगवान विष्णुकाे पुजा तथा आरधना गर्ने नियम रहिआ’एको छ । -खबर हब बाट
श्रम स्वीकृति फेरि खुल्यो, कहिले बाट दिइन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
थप ८९८० जनामा कोरोना सं’क्रमण पुष्टि, ८८४८ निको भए
May 22, 2021 admin समाचार 5719
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपा’लमा थप ८९८० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रम’ण पुष्टि भएको छ । यस्तै साही अवधिमा ८८४८ जना संक्रम’णमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार २० हजार १०५ जनामा गरि’एको परीक्षणमा ८९८०
बैंकमा काम गर्ने २६ बर्षिय युवक पक्रा`उ, आफ्नै दिदिले दिईन उजु`री
October 30, 2021 admin समाचार 5729
क`रणी उधोग गरेको आरो`पमा बागलुङको एक बैंकमा कार्यरत युवा पक्रा`उ परेका छन् । ३० वर्षीया एक महिलामाथी कर`णी गरेको आ`रोपमा प्रह`रीले सेन्चुरी बैंक लि. बागलुङ शाखामा कार्यरत कमल प्रसाद बिनारीलाई पक्रा`उ गरेको हो । कैलालीको
March 20, 2021 admin समाचार 5323
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता ग’गनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको कु’र्सीमा बस्ने नैतिक हैसियत नभ’एको बताएका छन् । उनले केपी ओली नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले सर्वोच्च अदालतले नेकपा पार्टीनै ओली–प्रचण्डको नभएको
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231237)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (230967)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (229280)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (229205)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228219)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228091)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227601)